Dhageyso:Xarakada Al Shabaab Oo Xoola Nool iyo Lacago Dollar ah Guddoonsiisay Qoys Tabaalaysan Oo Ku Nool Deegaanka Bargaan.
Written by Maamul on 06 February 2013. Xafiiska Zakawaatka XSHM ayaa Gargaar heer sare ah u fidiyay qoys tabaalaysan oo ku nool tuulo hoos timaad degmada Bargaan ee gobolka Gagaduud bartamaha dalka Soomaaliya. Mas'uuliyiin katirsan maktabka Zakawaatka oo socdaal indha indhayn ah ku maraya ayaa tuulada Gardheere kula kulmay qoys ka kooban 12 qof oo aad u liita. Dadka lagargaaray waxaa kamid ahaa Carruur waalan oo madaxa looga jira iyo Oday waayeel ah oo jira in kabadan 100 sanadood,dadka ducafada ah ayaa lasiiyay lacago Boqol Dollar ah 2 neef Geel ah iyo xoolo ari ah. Mas'uul katirsan xafiiska Zakawaatka ayaa u balan qaaday qoyska tabaalaysan in biilo meel loo saaray oo kafaalad qaad ay ka heleen XSHM.Halkan ka dhagayso Qoyska Lagargaaray Oo Ka Hadlaya Baahida ay Qabeen iyo Kaalmada loo fidiyay MP3ama ku dhagayso Flash Player
masha'alaah wallaahi jirkeyga waa jiriricoday markii aan dhagaystay dadka lwareystay aad bay u dhibanaayen saacado gudahood ayay xoolo geel ah iyo dollar ku heleen. Nimankan shabaabka ah waa kuwa dadkooda udamqanaya aniga ma taageersaneyn lkn waxa ay gaalada ka sheegaan iyo sida ay yihiin isma laha waa dad wadani ah oo dadkoodu u damqada gumeyste lama socdaan oo way ka damqanayaan	February 07, 2013
waa wax aan caadi ahayn ilaahow shababul mujahedin guuleey	February 07, 2013
ASC wallaahi walaalaheena way dadaalene allaha guuleeyo waxa uu alle ugu gargaaray waa mustadcafiinta oo ay ugargaarayaan	February 07, 2013